ထက်နိုင်ဇော်| February 16, 2013 | Hits:19,436
12 | | ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ရိုက်နှိပ်ထားသည့် ငွေစက္ကူအဟောင်းများကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး ရှေ့တွင် ရောင်းချနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – (ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
လယ်ယာမြေသိမ်း ဆွေးနွေးချက် တပ်ကိုယ်စားလှယ် ကန့်ကွက်မှု ဝေဖန်ခံရ
ရန်ကုန် စည်ပင် ရွေးကောက်ခံ အရာရှိများ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ မရ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ahnaingmae February 16, 2013 - 11:34 am	သူများနိုင်ငံငွေက သူရဲကောင်းပုံတွေပါတယ်.. မြန်မာနိုင်ငံဘဲ ဆင်ဖြူ စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်..။ တိရိတ္ဆာန် က တိရတ္ဆာန်ကို ကိုးကွယ်တော့ တိရိတ္ဆာန်ပုံတွေဘဲ ဖြစ်ကုန်နေပီ..။
Reply	ဗမာ February 16, 2013 - 7:10 pm	အဲဒီကိစ္စကို ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ။တမျိုးသားလုံးချစ်တဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုအသွင်နဲ့လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်သင့်ကြောင်းပါ။ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းအခုထိဆွေးနွေးသံ မကြားရသေးဘူးနော်။
Reply	Ja bu February 16, 2013 - 9:01 pm	နိုင်ငံတော်လူကြီးတွေက တိရိစာန်စိန်မကုန်သေးသရွှေ့တော့ ဆင်တို့၊ ခြင်သေ့တို့၊ ကြားတို့ ခွေးတို့ စသည့်ပုံတွေ သုံးဦးမှာဘဲ
Reply	true talker February 16, 2013 - 11:15 pm	Quite lucky that ,during the regime’s time, the Generals,did not mentioned with Nay Win & Than Shwe,picture. May be they wants to do so….
Reply	ရာဇာ February 16, 2013 - 11:21 pm	ဗိုလ်ချူပ်(ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း)ကို ချစ်ကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးမျှော် လင့်တောင့်တနေကြတဲ့အရာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း မြန်မာ့လွတ်
Reply	Shwe Yoe February 17, 2013 - 7:27 am	Why don’t we have the photo of Than Shwe hanged upside down.
Reply	ပုပ်ပါးသားလေးမင်းမင်း February 17, 2013 - 10:43 am	ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတိုင်းကို ဗိုလ်ချုပ်ပုံဖြစ်စေလိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်သင့်တာလည်း ကြာပါပြီ။
Reply	ညီတေဇ February 17, 2013 - 12:06 pm	တခြားနိုင်ငံမှာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ပုံတွေ ရိုက်တယ် ဒီမှာက ခြသေ့င်္ ကြီးစိုးတော့ တိရိစ္ဆာန်
Reply	yu February 17, 2013 - 2:30 pm	I agree to ahnaingmae.
Reply	Ko Khine February 17, 2013 - 8:34 pm	မောင်နေ၀င်း အပါဗိုလ်သန်းရွေအဆုံး သူတို့ အာဏာစက်တွေမေးမြိမ်သွားမှာဆိုတော့ အများ ပြည်သူကြည်ညိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အားပုံ တမင်ရည်ရွယ်ပြီးမထည့်တာ အားလုံးအသိပါ ။ ဒါပေမဲ့ အများပြည်သူတွေရဲ့ နလုံးသား ထဲမှာ မေးမြိမ်မသွားပဲ ပိုပြီး ဆွဲလန်းစေတာပဲ။
Reply	robert February 18, 2013 - 9:17 am	တိရိဆန်ပုံပါတဲံ့နိုင်ငံကတိရိဆန်အုပ်ချုပ်တာ လူပုံပါတဲ့နိုင်ငံကလူအုပ်ချုပ်တာ
Reply	Salai Lian February 18, 2013 - 1:09 pm	After Ne Win messed it up, Burmese currencies becomeajoke. Printing 45 Note and 90 Note made Burmaalaughing matter. People around the world are proud of their currencies but we the Burmese people have nothing to be proud of. If public poll is taken today, General Aung San’s picture will be their only choice to put on our currencies.
Reply	kyaw naing linn February 19, 2013 - 12:06 pm	အင်း…နိုင်ငံတကာမှာကတော့ သူတို့တွေလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေကိုရည်ညွှန်းပြီ ပိုက်ဆံမှာ ရိုက်နှိပ်ကိုးကွယ်ကြတယ် မြန်မာနိုင်ငံကေ လးစားစရာကောင်းတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေများလဲ ?
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်တရာပြည့် မွေးနေ့ပွဲ နိုင်ငံတဝန်း လွတ်လပ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပ
အ​ကောင်​အထည်​ မ​ပေါ်​သေးတဲ့ ဗိုလ်​ချုပ်​ရဲ့အိပ်​မက်​
ဗိုလ်ချုပ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့်မွေးနေ့ အကြို လှုပ်ရှားမှုများ